GOS oo Xaflad Dhiirigelin u Sameysay Xulka Kubadda Cagta ee 17-jirada
MUQDISHO: Guddiga Olambikada Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay Xaflad dhiirigelin iyo soo dhaweyn guushii Xulka Qaranka ee da`doodu ka yar tahay 17ka sano oo 21kii bishan magaalada Khartoum xulka dalka Suudaan ay kaga reebeen wareegii hore Tartanka Isreeb-reebka Ciyaaraha Dhallinyarada Qaaradda Afrika.
Ugu horeyn Guddoomiyaha wafdiga Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiino) ayaa ka warbixiyay xulka isagoo tibaaxay in ay xulka muujiyeen isku xirnaan, asluub tasoo uu sheegay in ay suragelisay inay guul Taariikhi soo hoyaan.
Guddoomiyaha XSKC Cali Siciid Guuleed ayaa uga Mahadceliyay GOS dhiirigelinta ay xulka u sameeyeen wuxuuna tilmaamay in dadaal weyn loo soo galay carbinta xulka 17-jirada oo uu sheegay in ay yahiin geeseyaal muujiyay horumarka K/Cagta dalkeena.
Guddoomiyaha Guddiga Olombikada Soomaaliyeed Duran Axmed Faarax ayaa sheegay in ay farxad u tahay GOS inay kala qeybqaadato bahda Isboortiga farxadda guusha xulka ka gaaray tartanka dhallinyarada Qaaradda Afrika.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay guushan , waxay tani cadeyn u tahay in Isboortigu u baahan yahay in lagu fara adeego dadaalkii badnaa ee la muujiyay loogana qeybgalay tartamadii caalamiga ahaa waxay mirahiisu noqdaan guulahan, Xulka wuu badiyay qiimeyntii FIFA ee Soomaaliya kor ayay u kacday – waxaana idinku adkeynayaa in la muujiyo dadaal dheeri ah si sumcadda Ciyaaraha Soomaaliya ay kor uga sii kacdo”ayuu yiri Guddoomiyaha GOS Duran Axmed Faarax.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Shaqada Shaqaalaha Dhallinyarada iyo Isboortiga Cabdullaahi Sheekh Cali [Qaloocoow] ayaa sheegay inuu goob joog u ahaa guusha Taariikhiga ahayd , wuxuuna xusay inuu Isboortigu u baahan yahay taageero dhinac walba ah si niyadda ciyaartoyda u noqoto mid sareysa. Wuxuuna balan qaaday in wasaaradiisu gacan ka gaysanayso horumarinta iyo dhiirigelinta Isboortiga guud ahaan.
Dhinaca kale Garsooraha Caalamiga Xasan Aadan X. Yabaroow (Xasan Wiish) ayaa xulka guddoonsiiyay abaalmarin lacageed oo dhan 500$ oo uu sheegay in Wish Academy ay ku dhiirigelinayso guusha Taariikhiga oo ay gaareen xulka ka yar 17-jirada.
Guud ahaan Xafladdan Qado Saharafta oo ay ka soo qeybgaleen mas`uuliyiin ka tirsan Xiriirada GOS, Ciyaartoyda Xulka. Iyadoo si weyn lagu soo dhaweeyay guusha xulka da`yarta 17-jirada, waxayna ahayd mid ay ka muuqatay farxad, dhiirigelin iyo dardaaran la xiriira in xulka guulo ka soo hoyaan kulmada ku soo fool leh sida kan ay ku balansan yahiin Xulka Algeria 12ka bisha Oktoobar.